के तपाईंलाई पनि न्रिद्रा लाग्दैन कि ?
२०७१ असोज २६ गते १४:५८
स्वास्थ्यका लागि न्रिद्रा दिनभरिको शारीरिक परिश्रमले शरीरले थकान, चिन्ता, तनाव महसुस गर्ने हुँदा आरामको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । प्राकृतिक रुपमै निदाएर शरीरले मानसिक तथा शारीरिक आराम प्राप्त गर्दछ । यस बेला रक्तसञ्चार, पाचन, श्वासप्रश्वास तथा स्नायु प्रणालीबाहेक शारीरिक क्रियाकलापहरु नहुने र सांसारिक गतिविधिहरुको...
मदन भण्डारी र राजपरिवार हत्या काण्डको रहस्य
२०७१ असोज २५ गते ६:००
एमालेका तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीको रहस्यमय जिप दुर्घटनाबाट भएको हत्याको खुलासा हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रिसर्च सेन्टर ‘आइसीआरसी’ले २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा भएको उनको हत्याको खुलासा गरेको हो | सो समय भण्डारीसँगै जीवराज आश्रितको हत्या भएको थियो...
लोग्ने विदेशमा, हेर स्वास्नीको रमिता
२०७१ असोज २५ गते ३:४६
आश्विन २५,काठमाडौ । वालाजु बाइपासको महेश्वरमार्गको मंगलबार साँझको दृश्य । रक्सी खाएर अर्धचेत महिला अपशब्दको फोहरा बर्साउँदै सडकमै नाच्न थालिन् । लाग्थ्यो त्यहाँ ठुलै झगडा भएको थियो । तर सत्यता बुझ्दै जाँदा कुरा अर्कै फेला पर्यो । खासमा ति महिला रक्सीले मातेपछि सडकमै बौलाउन...
कालो चियाखानेको मुटु स्वस्थ….
२०७१ असोज २४ गते ३:४९
तपाइँकालो चियाकत्तिको पिउनुहुन्छ ? कतिपयलाई त दुध नराखेको चिया मनै पर्दैन । कतिले भने दुध राखेको जियाले पेट खराबगर्ने भन्दै कालो चियाखाने गर्नुभएको छ होला । के तपाइँलाई कालो चियाले गर्ने फाइदाको बारेमाथाहा छ ? छैन भनेपनिचिन्तानगर्नुहोस् तपाइँले पिउने कालो चियाले तपाइँलाई थाहानभएपनितपाइँको मुटु...
उठ्ने बित्तिकै नहेर्नुस् ऐना र कसैको अनुहार, नत्र…
२०७१ असोज २३ गते १२:१७
दिनको सुरूवात राम्रो भयो भने तपाईको पुरै दिन नै राम्रो रहन्छ । तपाईहामी कसैले पनि आफ्नो दिनचर्यामा तनाव र दुःखसँग नबितोस् । कहिले काही हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि हाम्रो पुरै दिन निकै खराब बित्ने गर्छ । कुनै कुनै दिन तपाई हामीले खाना समेत खान...
चाउचाउ खाने बानी छ ? एक पटक यो पढ्नुस्
२०७१ असोज २३ गते १२:११
चाउचाउ नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्न्याक्समा पर्छ । छिटोछरितो र स्वादिलो हुने हुँदा हामी मध्ये धेरैले चाउचाउ सेवन गरिरहन्छौं । बच्चालाई मात्र होइन जवान र बृद्धहरुसम्म पनि चाउचाउ मन पराउँछन् । तर यही लोकप्रिय खाजा चाउचाउ स्वास्थ्यका लागि भने राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नहुन...
२०७१ असोज २२ गते ६:४८
सपनाको आ-आफ्नै एक अलग संसार हुन्छ। संसारका हरेक व्यक्तिले राती वा दिनमा सुतेको बेला सपना अवश्य देख्छन्। हिन्दु मान्यता अनुसार हरेक सपनाको एक विशेष फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। सपनाले भविष्यमा हुने वाला राम्रो नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ। तर हामी ती संकेतलाई...
२०७१ असोज २१ गते १०:०२
म र मेरी गर्लफ्रेन्ड २२ वर्षका भयौं। हामीबीच प्रायःजसो कन्डम नलगाई (सेक्सको अन्तमा शुक्रकीट बाहिर फ्यालिन्छ) सेक्स हुन्छ। दुई-तीन महिनादेखि मिन्स पछि सर्ने समस्या भएको छ। जस्तो कि ४ गते हुनुपर्ने नभएर ६ गते त कहिले ७/८ गतेतिर हुन्छ। यस्तो किन भएको होला ?...
मोबाइल किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
२०७१ असोज २१ गते ९:५५
एक नम्बरी मोबाइल सेट (वैधानिक) मासिक ७५ हजारको हाराहारीमा बिक्री हुन्छन् भने २ नम्बरी (अवैधानिक) ५० हजारको हाराहारीमा बिक्री हुन्छन्, उपभोक्ताले आफू १ नम्बरी सेटको उपभोक्ता हुने कि २ नम्बरी उपभोक्ता हुने विचार पुर्‍याउनुपर्छ। प्रत्येक मोबाइल सेटको आफ्नै परिचय हुन्छ। मोबाइलको ‘आइएमइआई’ नम्बर उसको...
तातो पानी पिउनुका फाइदाहरु जानकारी लिनुहोस् !
२०७१ असोज २१ गते ९:४७
बाँच्नका लागि पानी अत्यावश्यक छ । हाम्रो सरीरको अधिकांस हिस्सा नै पानीले ओगटेको हुन्छ । चिकित्सक, पोषणविज्ञ मात्र नभएर सौदन्य विज्ञ पनि एक ”वयस्क मान्छेले स्वस्थ रहनका लागि एक दिनमा ६-७ लिटर शुद्ध पानी पिउनु पर्ने सल्लाह दिन्छन् । कोही मानिसले चिसो पानी पिउँछन्...
« अघिल्ला 1 … 105 106 107 108 109 … 124 पछिल्ला »